LA OGAADAY: Sababtii Dhabta Ahayd Ee Ay Man United Uga Baxday Tartankii Ay Liverpool Ugula Jirtay Saxiixa Van Dijk Oo La Ogaaday. - Gool24.Net
LA OGAADAY: Sababtii Dhabta Ahayd Ee Ay Man United Uga Baxday Tartankii Ay Liverpool Ugula Jirtay Saxiixa Van Dijk Oo La Ogaaday.
September 5, 2019 Mahamoud Batalaale
Sababtii dhabta ahayd ee ay Manchester United ugula tartami wayday Liverpool saxiixa Virgil van Dijk ayaa si dhab ah loo ogaaday laba sanadood kadib markii ay Reds lacagtii ugu qaalisanayd ee difaac lagu iibsaday ka bixisay xidiga reer Holland.
Kooxaha Liverpool, Man United iyo Manchester City ayaa ku tartamayay saxiixa Virgil van Dijk markii uu joogay kooxda Southampton laakiin kooxaha reer Manchester ayaa tartanka iskaga baxay.
Wargayska Daily Mirror ayaa ogaaday sababtii dhabta ahayd ee ka danbaysay in Manchester United ay iskaga baxday loolankii ay Liverpool ugula jirtay saxiixa Virgil van Dijk.
Jose Mourinho ayaa markaas ahaa macalinka Manchester United wuxuuna is dhaafiyay fursada uu xidiga reer Holland ee Virgil van Dijk uu ku keensan kari lahaa Old Trafford.
Sida lagu sheegay warbixinta Daily Mirror, maamulka Manchester United ayaa markaasba aaminsanaa in ayna Liverpool ku garaaci karin Van Dijk maadaama oo ay u arkayeen in uu door bidayay kooxda Jurgen Klopp ee Liverpool.
Waxayna Man United halkii ay tartanka Van Dijk ku sii jiri lahayd ay door bidaysay in ay la soo saxiixato mid ahaan difaacyada kooxaha Napoli ama Tottenham ee Kalidou Koulibaly iyo Toby Alderweireld.
Markii ay Man United xaqiiqsatay in Van Dijk uu u jan jeedhay dhinaca kooxda ay sida wayn u xifiltamaan ee Liverpool, waxay isaga baxeen tartanka iyaga oo diirada saarayay saxiixyada Kalidou Koulibaly iyo Toby Alderweireld.
Laakiin Man United ayaan ku guulaysan isku daygii ay ku doonayeen saxiixyada Kalidou Koulibaly iyo Toby Alderweireld kuwaas oo uu Jose Mourinho wax walba u samaynayay in Old Trafford loogu keeno.
Laakiin Man United ayaa markii ay seegtay Van Dijk, Koulibaly iyo Alderweireld waxay dareenkeeda ku wareejisay difaacii kooxda Leicester City ee Harry Maguire oo uu Mourinho u arkay mid ay badal uga dhigan karaan difaacyada ay waayeen.
Laakiin muddadii uu Mourinho joogay Man United waxay awoodi kari wayday in ay sidoo kale hesho saxiixa Harry Maguire balse iyaga oo raacaya taladii Mourinho waxay suuqii xagaaga ee soo xidhmay ay rekoodhkii suuqa ee Van Dijk ay u jabiyeen Harry Maguire.
Si kastaba ha ahaatee, Man United ayaa tartanka Van Dijk ka baxday markii ay ogaadeen in xidiga reer Holland uu door bidayay in uu Jurgen Klopp ugu ciyaaro Liverpool.